Navalny, mpitarika ny Rosiana mpanohitra, miantso ny hanohizana ny fanoherana rehefa nahazo sazy an-tranomaizina 9 taona · Global Voices teny Malagasy
Notontosaina tany am-ponja ilay fitsarana lazaina fa azon'ny besinimaro atrehina
Voadika ny 02 Avrily 2022 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Nederlands, English
Pikantsary tao amin'ny Fantsona YouTube BBC mampiseho ny fitsarana an'i Navalny tao am-ponja.
Raha mbola variana amin'ny fanafihan’i Rosia an'i Okraina ny sain'ny besinimaro maneran-tany, dia saika tsy voamarika ny zava-niseho hafa nitranga tao Rosia, anisan'izany ny fitsarana an'i Alexey Navalny tao Moskoa, ilay mpitarika ny mpanohitra malaza indrindra ao amin'ny firenena.
Niverina tany Rosia i Navalny tamin'ny 17 Janoary 2021 taorian'ny nijanonany tao amin'ny hopitaly alemà rehefa sitrana tamin'ny fikasana hanapoizinana azy. Tamin'io andro io, nosamborina tao anatin'ny seranam-piaramanidina tao Moskoa izy noho ny fiampangana azy ho nandika ny sazy mihantona tamin'ny raharaha fanodinkodinam-bola teo aloha, ary notanana am-ponja.
Taorian’ny fitsarana nohafainganina, voaheloka higadra 3 taona an-tranomaizina izy ary nalefa tany amin'ny fonja iray tany amin'ny faritr'i Vladimir, tsy lavitra an'i Moskoa. Noho ny lazany ao Rosia taorian'ny namoahany ny kolikoly goavana sy nanaovany lasibatra ny Filoha Potinina, dia lasa niharihary fa tsy hifarana tamin'io didim-pitsarana io ny tantara, ary hiezaka hitady antony hafa hitazomana azy am-ponja ela kokoa ny manampahefana Rosiana.
Herintaona taorian'ny nisamborana azy, ny 25 Janoary 2022, nampidirin’ny Sampan-draharaha Fanaraha-maso Ara-bola Federalin'ny Federasiona Rosiana (Rosfinmonitoring) tao anaty lisitry ny mahery fihetsika sy mpampihorohoro i Navalny. Taoriana kelin'izay, nisy raharaha vaovao hanenjehana an'i Navalny natolotra ny Fitsarana Lefortovo ao Moskoa. Tamin'ity indray mitoraka ity, voampanga ho nanao tsinontsinona ny fitsarana sy nanao hosoka izy. Ity farany no niampangana azy noho ny voalaza fa faniratsirana ny mpitsara nanameloka azy tamin’ny fitsarana teo aloha tamin’ny taona 2021.
Mba hahatakarana no nanitarana io fiampangana io, dia tsara raha hojerena akaiky ny momba ny lisitr'ireo lazaina fa fanevatevana: “Tompoko, mandika lalàna ianao,” “Andriamanitro ô.” Ny hoe “maharikoriko”(омерзительный), “mahatsiravina”(гнусный), ary “tsy rariny” (офигеть), izay tsy nolazainy ny mpitsara akory, no teny henjana indrindra nambaran'i Alexey nandritra ny fitsarana.
Voalaza fa lany tamin'ny “filàna manokana sy ho an'ny tanjona ekstremista” ny ampahany faharoa amin'ny fiampangana momba ny hosoka, mifandraika amin'ny fanangonam-bolan'ny tetikasa sangany nataon’i Navalny, araka ny filazan'ny fampanoavana, izay antsoina hoe tahirim-bola miady amin'ny kolikoly (FBK, fikambanana tsy mitady tombontsoa manadihady, manambara ary misoroka ny kolikoly ataon'ireo manampahefana ambony) .
Raha ny zava-misy, olona manodidina ny 300.000 eo ho eo no nanolotra an-tsitrapo ny volany ho an’ny fanadihadiana nataon’ny fikambanana FBK, ka ny efatra tamin’ireo ihany no nahatsiaro ho voafitaka. nametraka fitoriana. Nitatitra ny fanadihadiana nataon'ny mpikambana ao amin'ny FBK fa vavolombelona hosoka ny roa tamin'izy ireo, ary mpandraharaha nohadihadiana tamin'ny raharaha heloka bevava tsy misy ifandraisany ny roa hafa, ary mety ho noteren'ny mpitandro ny filaminana hanao izany mba hanavotana azy ireo amin'ny raharahany manokana ao amin'ny Fitsarana, toy ny fanao mahazatra any Rosia.
Fepetra manokana ho an'ny fitsarana manokana
Nizotra tao anatin'ny toe-javatra tsy mahazatra ny fitsarana an'i Navalny: Raha tokony hitondra ilay voampanga ho eo amin'ny fitsarana ny fitsarana, dia ny fitsarana mihitsy no nifindra imbetsaka tany amin'ny fonja iray any amin'ny tanàna kely iray any amin'ny faritr'i Vladimir. Araka ny filazan'ny mpisolovavan'i Navalny, fanapahan-kevitra tsy mahazatra io ary tranga tsy fahita firy eo amin'ny sehatry ny fitsarana. Na izany aza, tsy nanambara ny antony nanapahany hevitra ny hanaovany ny fitsarana tany am-ponja ny manam-pahefana, raha tokony hitondra an'i Navalny ho any Moskoa. Navela hanatrika ny fitsarana tao amin'ny efitrano iray mitokana tamin'ny alalan'ny fahitalavitra ny mpanao gazety, saingy tapaka matetika ny fampitana noho ny antony voalaza fa ara-teknika. Na dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny rehetra aza ny fihainoana, tsy nahatanteraka izany ny fanatontosana izany tao am-ponja. Natao ny zava-drehetra mba hitazonana ny fitsarana tsy ho voatatitra araka ny tokony ho izy ary mba ho lavitry ny mason'ny besinimaro.
Ny mety ho antony mahatonga ny fepetra toy izany dia ny hoe, araka ny efa nampoizina, nanararaotra ny fitsarana i Navalny hanehoana ny heviny momba ny fanafihan'i Rosia an'i Okraina. Mampiseho ny lahatsary Instagram iray nisy ny fihainoana azy miteny hoe: “Manohitra ity ady ity aho. Heveriko fa tsy mendrika, mamono ny firahalahiana ary heloka bevava izany. Ny andian-jiolahy Kremlin no nanomboka izany mba hanamoran’izy ireo ny fangalarany. Mamono olona izy ireo mba hangalatra… Manohitra ity ady ity aho.”
Tamin'ny alàlan'ny kaontiny media sosialy, niantso ny olom-pirenena Rosiana hanao hetsi-panoherana ihany koa i Navalny hanehoana ny tsy fitovian-kevitra amin'ny fihetsiky ny manampahefana Rosiana. Nofaranany tamin’ny filazana hoe: “Raha ny fotoana an-tranomaizina no vidin'ny zon'olombelona hilazako izay heveriko fa ilaina sy ny zo sivily hiady ho amin'ny hoavy tsara kokoa ho an'i Rosia, dia afaka mangataka 113 [taona] izy ireo. Tsy hiala amin'ny teniko aho sy ny zavatra nataoko.”
Tamin'ny 22 martsa, voasazy higadra 9 taona any amin'ny fitondram-pananjahantany henjana i Navalny, izany hoe hatoka-monina mandritra ny fotoana maharitra izy, ary voarara tsy hifandray amin'ny voafonja hafa sy ny any ivelany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, fitsidihana voafetra, taratasy voafetra ary antso an-telefônina voafetra.
Fanirian’i Potinina hanafoana ny mpifanandrina aminy araka izay azo atao no kinendrin'ity famadihana ny rariny ity. Tiany hohadinoina i Navalny ary hilavo lefona ireo olona manaraka azy. Nohamafisin'ny fanakanana ny fidirana amin'ny tambajotra sosialy toy ny Twitter, Facebook ary Instagram ao Rosia nanomboka ny 14 Martsa ity fandrarana ity. Teo aloha, i Navalny, raha nigadra, dia nanana fahafahana nifandray tamin'ny mpanaraka azy tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy, izay notohizany niaraka tamin'ny fanampian'ny ekipany. Nanakana azy tsy hanana fahafahana hanaparitaka ny heviny amin'ny mpihaino marobe ny fameperana vaovao, ary manakana ny mpanara-dia azy tsy hifampiresaka an-karihary. Zava-dehibe indrindra izany amin'izao fotoanan'ny fahabangan'ny fampahalalam-baovao izao, rehefa matahotra ny haneho hevitra amin’ny feo mafy manohitra ny ady ny Rosiana ary mahatsiaro ho manirery sy mizarazara.
Mazava tsara ny tena tanjon'ny manam-pahefana fa ny hanafoana ny endrika fanoherana rehetra ary handrava izay mety ho fahafahana hanohitra ny ady sy ny lahateny manohitra an’i Potinina. Izany no nahatonga an'i Navalny tao amin'ny siokany, nivoaka taorian'ny fitsarana, nangataka ny mpanaraka azy tsy hitsahatra:
Tena mankasitraka ny rehetra aho noho ny fanohanan'izy ireo. Ary ry zalahy, tiako ny milaza hoe: ny fanohanana tsara indrindra ho ahy sy ho an’ireo gadra politika hafa dia tsy ny fiaraha-miory sy ny teny feno hatsaram-panahy, fa ny hetsika. Ny hetsika rehetra manohitra ireo mpamitaka sy mpangalatra ao amin’ny fitondran'i Potinina ireo. Na inona na inona endrika fanoherana an’ireo mpamono olona an’ady ireo.”
Nanambara ny Tahirim-bola miady amin’ny Kolikoly fa nisoratra anarana ivelan'i Rosia izy ireo ary hanohy ny asany amin'ny fanadihadiana momba ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.